Igumbi elizolileyo elipholileyo ngaphandle kwePittsburgh - I-Airbnb
Igumbi elizolileyo elipholileyo ngaphandle kwePittsburgh
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguRegina & Dan
Indawo yethu yimizuzu eli-10 ukuya kwidolophu yaseSaxonburg, kunye nemizuzu engama-45 ukusuka ePittsburgh. I-Ross park Mall yimizuzu engama-30, imizuzu engama-45 ukuya eGrove City Outlets Downtown Butler yimizuzu eli-15 kude. Ukuhamba ngebhayisekile kunye nokuhamba, ukukhwela inqanawa eMoraine State Park yimizuzu engama-35. Iindlela ezithandekayo zeSuccop Nature Conservancy 5 imizuzu kude.
Ibhedi yabucala epholileyo kunye nebhafu kwindawo yegadi yelizwe. Iigadi ezichumileyo zangaphandle kunye neentyatyambo kunye nobugcisa beyadi enqabileyo. Imozulu ivumela ukuba uhlale ngaphambili kwipatio okanye ngasemva ngasemngxunyeni womlilo kwaye wonwabele iglasi yewayini. Hamba izitiya uzenze ukhululekile, nizindwendwe zethu. Umzobo wethu wegolide uHector ligciwane lothando
Le ndawo yindawo ezolileyo yelizwe. Uya kuva amasele ebusuku kunye neentaka kusasa, sineehektare ezi-5 ngoko akukho ngxolo yasebumelwaneni.
Umbuki zindwendwe ngu- Regina & Dan
Ngokuncinci okanye ukunxibelelana okuninzi njengoko uthanda, uyalela inqanaba lokuhlalisana. Silapha ukuba uyasifuna, kungenjalo wonwabele imfihlo yakho.